Pokémon GO 0.153.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.153.2 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
NEW! အသင်းကို GO ဒုံးပျံပိုကီမွန် GO လောကီသားတို့သည်ကျူးကျော်ခဲ့သည်! သငျသညျPokéStops restore နဲ့ပိုကီမွန်ကယ်ဆယ်အဖြစ်ရေးအဖွဲ့ GO ဒုံးပျံဝက်အော်နှင့်အတူစစ်တိုက်။
သူတို့ကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းအဖြစ်ပိုကီမွန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူကမ္ဘာလုံးအနှံ့လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းကို Join ။ ပိုကီမွန် GO TechCrunch အားဖြင့်ဘီလီယံကို 1 ကျော်ကြိမ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်များနှင့် Game Developers ရွေးချယ်မှုဆုပေးပွဲအားဖြင့် "အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်း" အမည်ရှိထားပြီးကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂိမ်းအာရုံတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် "တစ်နှစ်တာ၏အကောင်းဆုံး App ကို" ။
Pokemon လောကီသားတို့သည်အချဉ်း: သင်များမှာနေရာတိုင်းမှာပိုကီမွန် Explore နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ!
သင့်ရဲ့ပိုကီမွန်ခိုင်မြဲပါစေနှင့်ဆုလာဘ်ဝင်ငွေကိုကူညီရန်သင့်ကို Buddy တယောက်ပိုကီမွန်တွဲပြီးခရီး!
ဝင်ရောက်စီးနင်းစစျပှဲကာလအတှငျးအစွမ်းထက်ပိုကီမွန်ဖမ်းရန်သည်အခြားလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းနှင့်အတူတွင် TEAM UP!
ဒါဟာရွေ့လျား-သင့်ရဲ့ Real-ဘဝ Adventures စောင့်ဆိုင်းရရန်အချိန်ပဲ! သွားကြရအောင်!
- အပိုဆောင်းလိုက်ဖက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များအတွက် PokemonGO.com သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
- ဇူလိုင်လ 11 ရက်, 2019 ခုနှစ်၏အဖြစ်ပြန်ကြားရေးလက်ရှိ။
APK ဗားရွင္း 0.153.2
Release date: 2019-09-18 15:43:37